Xiaomi no laharana fahaefatra farany amidy indrindra eran-tany | Androidsis
Eder Ferreno | | About us, Xiaomi
Hatramin'ny taon-dasa dia hitantsika ny fihanaky ny Xiaomi eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny marika sinoa dia efa manana fivarotana maro any Espana ary tsy ho ela dia hanaraka ireo dingana ireo ihany ny tsena eropeana hafa toa an'i Italia sy i Frantsa. Ankoatr'izay, any amin'ny firenena nahaterahany sy any India dia mijanona ho iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra izy. Izany dia nahatonga ny marika hametraka ho marika fahefatra lafo indrindra manerantany.
Ity dia asehon'ireo tarehimarika fivarotana finday avo lenta amin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2018. Natao ho ofisialy ireo isa asehoy fa nahavita nihoatra ny OPPO i Xiaomi, iray amin'ireo mpifaninana mivantana aminy. Mandritra izany fotoana izany, Samsung dia mijanona amin'ny laharana voalohany.
Ity fiakarana amin'ny laharana ity dia manan-danja lehibe ho an'i Xiaomi, rehefa hitany fa mihoatra ny iray amin'ireo mpifaninana aminy indrindra izy ireo. Ho fanampin'izay, tsy maintsy asongadinay ny fomba nitsanganany. Satria tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa dia nivarotra telefaona 12,6 tapitrisa izy ireo, raha amin'ity taona ity ny fivarotan'izy ireo dia tafakatra 28,3 tapitrisa.
Fisondrotana miavaka ary izany no mahatonga ny anjarany amin'ny tsena dia nitombo hatramin'ny 3,6% ka hatramin'ny 8,2% tao anatin'ny herintaona. Izay manasongadina ny fandrosoana lehibe an'ny marika sinoa eny an-tsena. Hatramin'ny niaretany ny fiakarana lehibe indrindra amin'ny varotra sy ny fizarana tsena.
Misongadina i Xiaomi ary misy ihany koa ny fiakaran'ny Apple sy Huawei. Samy mampiakatra ny varotra ireo orinasa roa ireo, indrindra ny marika sinoa. Noho io dia mijanona amin'ny toerana mitovy amin'ny tsena ihany izy ireo, somary akaiky kokoa an'i Samsung. Ny orinasa Koreana dia mijanona eo amin'ny laharana voalohany, toy ny mahazatra, na dia mihena kely aza ny varotra sy ny tsena.
Na dia hitantsika aza fa mbola lavitra ny lalan'ireo mpifanandrina hihaza an'i Samsung. Fa azo antoka fa mahaliana ny mahita ny fomba fitomboan'ny marika roa toa an'i Xiaomi sy Huawei amin'ny tsena amin'ny fomba miavaka. Noho izany dia ilaina ny mijery raha mitazona an'io fironana io mandritra ny taona izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia efa marika fahaefatra be mpividy indrindra manerantany